စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေ အတွက် အာရှတိုက်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ပလာဇာကြီးဖွင့်လှစ်မည်..... - Myanmarload
စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေ အတွက် အာရှတိုက်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ပလာဇာကြီးဖွင့်လှစ်မည်.....
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 12:45 October 03, 2016
မြန်မာ နိုင်ငံ အနေ နှင့် နိုင်ငံ တကာမှာ ဂုဏ်ယူ ဝင့်ကြွားရမယ့် စာအုပ်ပလာဇာကြီး ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ထိုစာအုပ်ပလာဇာကြီး က ဘယ်လောက်ထိ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလဲ ဆိုတော့......
'အရှေ့တောင် အာရှ၏ ပထမဆုံး စာအုပ်ပလာဇာကြီး
မန်မာပြည်တွင်သာမက အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ပထမဆုံးဖြစ်လာမည့် Book Plaza ကြီးတစ်ခုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
#Book_Plaza ဆိုတာ ဘာလဲ?
Book Plaza ဆိုတာ စာအုပ်တွေ သီးသန့်ရောင်းမယ့် ပလာဇာကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပလာဇာကို လမ်းမတော် သံစျေး (တရုတ်တန်း) ငါးလွှာတွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပြီး။ ပေ ၁၀၀ x ပေ ၂၀၀ (စုစုပေါင်း - ပေ ၂၀၀၀၀ ပတ်လည်အကျယ်) ရှိ နေရာကြီးမှာ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည်။
#Book_Plaza မှာ ဘာတွေပါသလဲ?
(က)ပြည်တွင်း စာရေးဆရာကြီးများ၏ အထိမ်းအမှတ်နေရာများ
(ခ) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲများ ကျင်းပရန်နေရာ
(ဂ) နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ဆိုင်များ၊
(ဃ)ပြည်တွင်း ထုတ်ဝေသူများ၏ စာအုပ်ဆိုင်များ၊
စာအုပ် ပလာဇာသည် စာအုပ်ရောင်းချရန် သာမန် စျေးပလာဇာမျိုး မဟုတ်ပါ။ စာပေရေးရာ စိတ်ဝင်စားသူများ၏ သုခဘုံ တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်မည်။ စာပေပလာဇာသို့ လာရောက်မည့် လူငယ်များ၊ ကလေးများအတွက် မြန်မာ စာရေးဆရာကြီးများကို သိရှိ အမှတ်ရစေရန် သမိုင်းဝင် စာရေးဆရာကြီးများ၏ အထိမ်းအမှတ်များကို ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ခင်ကျင်းပသထားမည်ဖြစ်သည်။ အခါအားလျော်စွာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ အဆိုပါ စာဆိုတော်ကြီးများ၏ အထိမ်းအမှတ်နေ့များ၊ မွေးနေ့များတွင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို လာရောက်လည်ပတ်စေကာ ကျောင်သားလူငယ်များနှင့် စာပေပညာရှင်အများ ဝေးကွာနေသည့် ကွက်လပ်တစ်ခုကို နီးကပ်စေမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအထိမ်းအမှတ်များကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ပြသထားမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြိို့ ၏ Tourist Attraction နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
(ခ) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပရန်နေရာ
ပြည်တွင်း ပြည်ပ စာရေးဆရာများ၏ စာအုပ်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ရန်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်၊ စာအုပ် ပရိုမိုးရှင်းများပြုလုပ်ရန်၊ အခြားသော စာပေအနုပညာဆိုင်ရာ ပွဲတော်များကျင်းပရန်အတွက် အများပြည်သူ အသုံးချရန် နေရာကို ဆိုလိုသည်။ လူဦးရေ တစ်ရာဝန်းကျင်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိမည်။
(ဂ) နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ဆိုင်များ
မြန်မာပြည်၏ အရှားပါးဆုံး အရာများထဲတွင် နိုင်ငံတကာ စာအုပ်များလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ်များ ရှားပါးမှူကြောင့် ကိုးကားစာအုပ်ရှာဖွေလိုသည့် ပညာရှင်များ၊ ရည်ညွန်းစာအုပ် ရှာဖွေလိုသည့် နိုင်ငံရေး သုတေသီများ၊ မှီငြမ်းလေ့လာလိုသည့် ပြည်တွင်း စာရေးဆရာများအတွက် များစွာ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ အဆိုပါ အခက်အခဲများအတွက် နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ဆိုင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ထည့်သွင်း ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ပြည်တွင်း ထုတ်ဝေသူများ၏ စာအုပ်ဆိုင်များ စာအုပ် ပလာဇာကြီး၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေရေးတိုက် ၃၀ ဝန်းကျင်အတွက် စာအုပ်ရောင်းချရန် နေရများ ဖန်တီးပေးမည်။ ထုတ်ဝေသူများက စာဖတ်သူများထံ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခွင့်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းကြောင့်
၁။ ထုတ်ဝေသူများက မိမိတိုက်ထုတ် စာအုပ်အားလုံး စုံလင်အောင် ခင်းကျုင်းရောင်းချခွင့်ရမည်။ သာမန်စာအုပ်ဆိုင်များသည် နေရာအခက်အခဲကြောင့် စာအုပ်တိုက်တိုင်း၏ စာအုပ်တိုင်းကို နေရာမပေးနိုင်ပါ။
၂။ သာမန်စာအုပ်ဆိုင်များကို ၁၀၀% မှီခို အားထားနေရခြင်းမှ လွတ်ကင်းကာ စာဖတ်သူထံ တိုက်ရိုက်ရောင်း ချခွင့်ရမည်။ စာအုပ်ဆိုင်များကဲ့သို့ ရာခိုင်းနှူန်းကော်မရှင် ပေးရန်မလိုတော့။ ထိုကြောင့် စာဖတ်သူကို ရာခိုင်းနှူန်းလျှော့ရောင်းနိုင်သည်။ စာအုပ်ရောင်းအား သိသိသာသာ တက်လာပါလိမ့်မည်။
၃။ မိမိတိုက်ထုတ် စာအုပ်အသစ်ထွက်တိုင်း မိမိဆိုင်တွင် ထင်ထင်ရှားရှား ကြော်ငြာ လုပ်ခွင့်ရှိသည်။ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ၊ ပရိုမိုးရှင်းပွဲများ လုပ်နိုင်မည်။
၄။ စာအုပ်ဝယ်သူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိစာအုပ်တိုက် ဖောက်သည်များ၏ အသံကို အမြဲတမ်း ကြားသိနိုင်မည်။ စျေးကွက်တောင်းဆိုချက်ကို တိုက်ရိုက် သိခွင့်ရမည်။
မြို့ပြ၏ ဖွံဖြိုးချဲ့ထွင်မှူများကြောင့် စာအုပ်အဟောင်းတန်းများသည် အနာဂတ်ကာလတွင် ရေရှည်ရပ်တည်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်ခံနေရပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာအုပ်ပလာဇာတွင် စာအုပ်အဟောင်းတန်းများ၏ အရသာကို ပြန်လည်ရှာဖွေ ခံစားနိုင်ရန် အထူးစီစဉ်ထားသည်။ စာအုပ်အဟောင်းတန်းပုံစံနေရာ ဖန်တီးကာ စာအုပ်ဟောင်းတန်းများတွင် ရောင်းချသည့် ပုံစံအတိုင်း ခင်းကျင်းရောင်းချပေးမည် ဖြစ်သည်။
နည်းနည်းနှင့် ကျဲကျဲ ၀ိုင်းရသည့် ပြည်တွင်း ထုတ်ဝေသူများအတွက် မြို့လယ်ကောင်တွင် ရုံးခန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ အိပ်မက်ဆိုးကြီး တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်ပလာဇာတွင် ရုံးခန်းငယ်များ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပြည်တွင်း ထုတ်ဝေသူများ သက်တောင့် သက်သာနှင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ် ပလာဇာအတွင်း လည်ပတ်လေ့လာပြီး မောပန်းလာပါက ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် အပန်းဖြေနိုင်ရန် နေရာ တစ်ခုအဖြစ် စီစဉ်ထည့်သွားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်အသစ်များနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်မယ့် စာအုပ်တိုက်များကို ထပ်မံကြေငြာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။' ဆိုပြီး Yangon Book Plaza ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ တင်ထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေ အတွက် သတင်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်သလို မြန်မာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အနေနှင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားရမည့် ကိစ္စ တစ်ခုပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေလဲ သိရအောင် လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါဦး....